Taleefanka Cilmi Badan ee Tartanka: 5 Siyaabaha Loo Xakameyn Karo Websiyada On Chrome
Websaydhadu waa ilo macluumaad oo aad u fiican, laakiin xannibista bogagga internetka ee aan loo baahnayn, shaki iyo kuwa qaangaarka ah ayaa muhiim u ah nabadgelyada internetka. Mararka qaar dadka isticmaala waxaa loo wareejinayaa inay bixiyaan qoraallo blog ama content web, waxayna ku qasban yihiin inay saxiixaan dalabyada. Haddii arimahani ay si fiican u yaqaanaan, waa inaad xannibaa dhammaan shabakadaha internetka ee cajab-raadinta ah ee shabakada internetka, Google Chrome - cla erfaringer.
Halkan Michael Brown oo ah khabiir hoggaamineed oo ka socda Semt , ayaa ka hadlay habab xiiso leh oo caan ah oo lagu joojin lahaa shabakadaha internetka ee Chrome
1. Abuuri Macluumaadka Kormeeraha Korjoogaha
Horyaalka ugu horeeya uguna fiican wuxuu abuuraa astaanta isticmaalaha kormeera. Dareemaha habkan ayaa ah in aysan u baahneyn wax dheeri ah, taas oo micnaheedu yahay inaad si fudud uga hortagi karto carruurtaada inay soo booqdaan boggaga aan rabin ama kuwa qaangaarka ah. Iyada oo la adeegsanayo noocan oo kale ah, waxaad si sahlan u kormeeri kartaa bogga ama barnaamijyada aan amaan u ahayn qoyskaaga oo aad si degdeg ah u xiran tahay. Si aad ugu bedesho Google Chrome, riix saddexda liiska ku qoran ee ku yaala Your Settings, iyo qaybta dadka, guji doorashada option. Halkan waxaa lagaa rabaa inaad ku darto qof cusub oo sax ku doorto ikhtiyaarrada kormeerka ka hor inta aadan kaydin goobaha. Ugu dambeyntii, u gudub doorashada ikhtiyaarka ah waxaadna gujisaa xulashada kormeerka si aad u hubiso haddii astaamaha kormeerka la abuuray iyo in kale
2. Liiska Qalabka Shakhsiga
Waa mid ka mid ah siyaabaha ugu fiican uguna fudud ee lagu xakameyn karo websaydhyada Google Chrome. Haddii aad raadinayso inaad ka horjoogsatid bogagga ka soo baxa natiijooyinka raadinta Google, Liiska Shakhsiyeed ee Shakhsi ahaaneed ayaa ah faahfaahinta saxda ah ee aad adigu iyo Google u siisay dadka isticmaala adduunka..Marka si buuxda loo rakibo, waxaad ka faa'iideysan kartaa fursadan kordhinta fursaddan, sida inaad tagto dashboardka iyo Block websaydhka ah inaadan rabin in carruurtaada ay u socdaan. Dhanka hoose, waxaad arki doontaa ikhtiyaarka shabakadaha Internetka ee Blocked, oo aad ku socon karto si aad u maamusho dhammaan bogagga internetka ee la xiray.
3. Bogga xayiraadda
Mid ka mid ah waxyaalaha ugu wanaagsan ee ku saabsan Bogga Block waa in ay tahay mid dhab ah oo lagu kalsoonaan karo. Marka aad ku qorto website-yada la xiray, way ku fududahay inaad ku darto ereyga sirta ah si aad u xakamayso goobaha bogga si aysan carruurtaadu u helin goobaha ama maqaallada la xiray. Marka aad ku rakibtid faahfaahin dheeraad ah, u gudbi dooraha Doorashooyinka oo ku dar bogga aad rabto inaad ka hortagto. Doorashada soo socota waa inaad gujisaa sanduuqa Aqoonsiga Awoodda oo ha ilaawin inaad sheegto sirtaada ka hor inta aadan kaydin goobaha.
Shaki kuma jiro, StayFocusd waa kan ugu wanaagsan oo ka mid ah bogagga ugu caansan ee xannibaya kordhinta isticmaalayaasha Chrome. Waxay si fiican u shaqaysaa labada xisaabood ee Facebook iyo Gmail waxayna xadeyneysaa xaddiga waqtiga aad ku qarashgarayn doonto bogga qaangaarka. Waa sahlan tahay inaad sheegto saacadaha ama maalinta StayFocused inay xakameyso dhaqdhaqaaqyada socdaalka. Ka sokow, waxaad si sahlan u abuuri kartaa liisaska bogagga la xiray oo la ogol yahay. Doorasho kale oo la doorto waa xulashada nukliyeerka. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad xakameyso bogga shaki laga galo dhowr bilood ama sanado.
5. Nanny ee Google Chrome
Nanny waa qadar qiimo leh oo leh siyaabo kala duwan iyo qaababka. Waxay ka caawisaa sameynta boggaga xayeysiisyada, waxay qeexeysaa waqtiga aad ku bixinayso bogga internetka oo wuxuu maamulaa xiritaanka ilaa xad. Iyadoo Nanny loogu talagalay Google Chrome, waxaad xannibi kartaa shabakado badan oo aad rabto. Kaliya tag bogga Block URLs oo ku dar magaca magaca bogga ee aad rabto inaad xakameyso. Waxaa suurtagal ah in la sheego waqtiga aad rabto in aad xannibato goob gaar ah. Riix badhanka Badbaadada marka aad dhamaysid.